Home Wararka Dowlada Soomaaliya oo sheegatay in ay dhaawacday Cali Dheere
Dowlada Soomaaliya oo sheegatay in ay dhaawacday Cali Dheere
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegatay in Maxamuud Raaage Cali dheere oo ahaa afhayeenka Al Shabaab uu ku dhaawacmay howlgal dhawaan ka dhacay Degaanka Shaam oo hoostaga Degmada Aawdheele, waxaana howlgalkan fuliyay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya.
Warbaahinta ku hadashay afka Ciidamada xoogga dalka ee SNA Radio ayaa sheegtay Cali Dheere lagu dhaawacay howlgal ka dhacay 11-kii bishan Agosto deegaanka Shaam.
Dowlada Soomaaliya ayaa dhowr mar sheegatay in ay dishay Cali Dhere laakiin markii danbe uu ka soo muuqaday aaladaha la iska arko. Ma jiro ilo ka baxasan warbaahinyta dowlada oo xaqiijisa hadlka ka sooyeeray Raadiyaha ciidanka.
Sidoo kale warkan ay shaacisay Warbaahinta dwolada ayaa lagu sheegay in howlgalkii ay qaadeen ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Danab ay ku dileen illaa 15 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab.
Previous articleAdan Barre Ducaale oo sheegay in ay Soomaaliya ku abaal dhacday Kenya
Next articleQarax ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada Awdheegle
Jubbaland oo Ciidamo horleh geysay Gobolka Gedo
(Xog) Fahad Yasin oo dallaal ka ah sii deynta Dhakhaatiir u...